Isamba encane esakhiwe nge-ceramic plate insulating China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Ceramic Substrate > Isamba encane esakhiwe nge-ceramic plate insulating
I-Model No.: JH.MC.036
Esikhathini esivamile, i-Metallized isolator yenziwe ngekhamera elihle, njenge-95% alumina, 99% i-alumina noma ukuhlanzeka okuphakeme. Kukhona umswakamiso ongaphansi kwendwangu njengokwakheka kwesisekelo sokwandisa ukugobheka kwenqubo yokugubha endaweni yokugcoba endaweni, khona-ke isembatho sensimbi esithile sizohlanganiswa kwi-metallization, efana ne-nickle plating, i-silver plating, i-gold plating noma abanye.
I-Jinghui imboni Ltd iye yagxila ekuhlinzekeni kwe-isolity ye-isolated steel ceramic isolator ngaphezu kweminyaka eyi-10, zonke izingxenye zensimbi esizihlinzekiwe zifakazele ukuthi:
1. Amandla angasese we-metallic seal-seal.
2.Veza ekusetshenzisweni okungekho emthethweni emhlabeni wonke
Ukusebenza okuhambisanayo nawo wonke ama-alloys ajwayelekile
4. Amandla okukhiqiza amanani amaningi kanye nokukwazi ukukhulula okukhulu
-Ubukhulu obukhulu obubhekene nokubekezelelana okunamandla kakhulu.
-Izici ezinomsoco, izici kagesi nezifudumele.
- Ubukhulu obukhulu nobuciko bephethini
-Izikhwepha ezinamandla zokubambisana.
Uhlobo lwe-metallization olujwayelekile lokujoyina:
1. Umzimba we-ceramic + wesiliva
2. Umzimba we-ceramic + we-shayela
3. Umzimba we-ceramic + we-Tin
4. Umzimba oqoshiwe we-ceramic + Mo / Mn metallization
5. Umzimba oqoshiwe we-ceramic + Mo / Mn (W) metallization + nickle plating
6. Umzimba oqoshiwe we-ceramic + W wenziwe nge-metallization + igolide
It kabanzi Okuphakelayo-ngokusebenzisa insulators, Izihloko, High-amandla ezitsheni, akwazi ukugcina nangokuvikela, yisivikelo izindandatho amasilinda, Precipitator imikhiqizo, Amandla wokushintsha, Okuhambayo wave amashubhu, Umshini interrupters, i-Windows, igridi Amandla amashubhu,-X-ray amashubhu a nd ngakho kuqhubeke.